Inotaridzika: yakapusa asi inoshanda yeMarkdown mupepeti | Linux Vakapindwa muropa
Inotaridzika: yakapusa asi inoshanda yeMarkdown mupepeti
Munyika yeLinux kune nhamba hombe yekushandisa kune ese marudzi ezvinangwaKubva pamugadziri wemifananidzo, vatambi venhau, kune mafomu ekugadzira macircuit, 3D modelling uye nezvimwe.
Asi yeapplication akakosha musystem ndeyekunyora mameseji, dzayo dzinoverengeka dzadzo dzakakurukurwa pano pablog.
Pakati payo kunyange chimwe nechimwe chazvo chine chinangwa chayo chakasarudzika, kubva pane yakapusa (kwete yakapusa) ayo anoshandiswa mune terminal senge nano kana vim kana mune yakajeka graphical senge gedit, kate, bluefish pakati pevamwe.
Panguva ino isu tichataura nezve yakapusa asi inobatsira zvinyorwa edhita, izvo zvandine chokwadi chekuti zvinopfuura chimwe chete zvinoita kuti iwe ude kuedza.
Inotaridzika idiki diki yeMarkdown mupepeti Inobvumirwa (MIT) inoyevedza kana iwe uchiziva maturusi ekushandisa seApple Notes kana Evernote.
Iine interface yakafanana chaizvo neApple Notes. Zvinotaridzika zvinopa mushandisi mukana wekugadzira mabhuku ekunyorera kuti aise zvinyorwa zvavo, zvese muWYSIWYG uye pasina kuzvivharira mufomati yeimba.
kosha Icho muchinjikwa-chikuva uye inotsigira kuwedzerwa kwekubatanidza, mifananidzo, kodhi blockcha fomati, kugona kwekutsvaga zvinyorwa zvako, bhukumaki kana pini zvimwe zvinyorwa, wedzera mataki, uye zvimwe.
Iyi software inoshanda imomo, asi unogona kuyananisa zvinyorwa zvako kuburikidza neshanduro yakafanana neDropbox kana kunyangwe neGit.
Uyewo, Tinogona kusimbisa izvo Zvinoshamisa hazvishandise chero WYSIWYG mupepeti. Zvinyorwa zvako zvakachena maMarkdown mafaira, sezvo metadata yavo inoponeswa seMarkdown.
Pakati pezvinhu zvakakosha zvinogona kusimbiswa mune ino zvinyorwa edhita ndeizvi:
Hapana mafomati epamutemo: Chinozikanwa inongova yakanaka kumberi kumagumo kweiyo yakarongedzwa dhairekita sezvakaratidzwa pamusoro.
Manotsi ndeemafaira eMarkdown mbishi, metadata yavo inochengetwa seMarkdown zvinhu.
Zvinosungirirwa zvakare mafaira akapfava, kana iwe ukabatanidza pikicha.jpgnota, zvese zvinochengetedzwa uye kuwanika senge chero imwe faira.
Inozivikanwa haishandisi chero WYSIWYG mupepeti, inongonyora iyo Markdown uye inoshandura seMarkdown.
Iyo yakavakirwa-mukati mupepeti ndeye CodeMirror, izvi zvinoreva kuti iwe unowana zvinhu senge multi-cursor nekutadza.
Kana zvimwe zvemberi zvekugadzirisa maficha zvichidikanwa neimwe chete nzira, iyo yazvino noti inogona kuvhurwa mune yayo yekumusoro yeMarkdown mupepeti.
Matagi akawedzerwa nekusingaperi, angangoita ese mamwe manotsi-kutora maapplication anosiyana pakati pemabhuku ekunyorera, ma tag, uye matemplate.
In Notable, vanogona kuva nemidzi tag (foo), ma tag anogona kuwedzerwa nekusingaperi (foo / bar, foo /… / qux) uye ichiri kutsigira mabhuku ezvinyorwa uye matemplate, iwo angori akakosha ma tag ane rakasiyana icon (Notebooks / foo , Matemplate / foo / bar).
1 Maitiro ekuisa Anoshamisa paLinux?
1.1 Kuisirwa pane Arch Linux
Maitiro ekuisa Anoshamisa paLinux?
Kune avo vanofarira kugona kuisa uye kuyedza ino inoshamisa Markdown mupepeti pane avo masisitimu, Vanogona kuzviita mune imwe yedzinotevera nzira dzatinogovana pazasi.
Kazhinji kune chero kugoverwa kweLinux, tinogona kuisa ichi chishandiso nekukodha kodhi yayo kubva git.
Izvo chete zvinodiwa zvatinofanira kuzadzisa mune yedu system ndeyekuti inogona kuisa uye kumhanyisa kunyorera kwakanyorwa muNode.js.
Naizvozvo, kana iwe usina rutsigiro urwu, unogona kuzviita nenzira inotevera.
PaArch Linux uye nemidziyo yayo senge Antergos, Manajaro Linux, mhanyisa unotevera kuraira kuti uiise:
MuDebian, Ubuntu, Linux Mint uye chero zvigadzirwa zveizvi, iwe unofanirwa kumhanya unotevera kuraira:
PaRHEL, CentOS, iwe unofanirwa kutanga wagonesa iyo EPEL repository.
Uye woisa Nodejs uchishandisa rairo:
MuFedora ivo vanongofanira kumhanya unotevera kuraira:
Iye zvino kuisa mupepeti, isu tinongofanirwa kunyora zvinotevera:
Kuisirwa pane Arch Linux
Yenyaya chaiyo yeArch Linux uye zvigadzirwa zvayo, ivo vanogona kuita yekumisikidza yekumisikidza neimwe nzira, iwe unongofanirwa kuve nerutsigiro runogoneswa kumisikidza kunyorera kubva kuAUR.
Iwo iwo murairo wavanofanira kuita ndewe:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Inotaridzika: yakapusa asi inoshanda yeMarkdown mupepeti
kwechinguva ndakanga ndakaita kunge ndichiona Joplin.
Hector Lake akadaro
Nezuro husiku ndakaisa Notable mupepeti pabhuku rangu rekunyorera pasi peUbuntu 18.04.1, asi mushure mekumisikidza kwenguva refu (kutevera mirairo yako) iyo yakatora awa kana kupfuura, iyo koni yakasara iri inert, iyo inotora yakagadziriswa asi ichibvuma kuiswa kwevatambi , hongu Zvakanaka, chero rairo yakanyorwa haina zvainoita, kudzamara ini ndazofunga kuuraya chikamu.
Iye zvino handina nzira pfupi, hapana kupinda kwakananga, kana chero chinhu chinondiudza kana kumisikidza kwapera, kubudirira kana kwete.
Ungave uine chero mazano.
Pindura Hector Lago
Mangwanani. Tichifunga zvawandiudza, iwe wakasarudza kuumbwa (hongu, inogara iri refu). Unogona kusarudza iyo AppImage iwe yaunogona kuwana nayo:
Kana zvakare sarudza iyo Snap package.
Hi David, pane murairo wekubvisa software here? sezvo isingashande zvakanaka kwandiri mu fedora.
Iyo nyowani vhezheni yeMixxx 2.2 inosvika, iyo nzira kune Virtual DJ